Notanterahina tetsy amin'ny Carlton Anosy androany nyTatitra ampahibemaso isam-paritra mahakasika ny fanitsiana ny lalàna mifehy ny serasera. (Jereo Sary Tohiny)
Senatera notendren’ny filohan’ny Repoblika ho mpikambana tao amin’ny Antenimierandoholona Ravoninahitriniarivo Mbade Jeanine Gabrielle. Voafidy ho Solombavambahoaka tao Maevatanana, tamin’ny lisitra tsy miankina, anefa ity farany. Tsy afaka ny sady ho Senatera no Solombavambahoaka anefa Ravoninahitriniarivo Mbade Jeanine Gabrielle. Tsy mamela an’izany ny lalàna. Nandefa taratasy any amin’ny Fitsarana avo momba Lalampanorenana ny filohan’ny Antenimierandoholona, Rakotovao Rivo tamin’ny 29 jolay 2019 hanendrena izay Senatera hisolo toerana an’i Ravoninahitriniarivo Mbade Jeanine Gabrielle.
mercredi, 31 juillet 2019 21:08
KMF/CNOE: Mitaky ny hanaovana ny fifidianana kaominaly amin’ity taona 2019
« Mitaky ny hanaovana ny fifidianana kaominaly » amin’ity taona 2019 ity ny “KMF/CNOE –Fanabeazana Olompirenena”. « Mbola azo atao tsara izany hatramin’ny faha-30 ny volana novambra 2019, araka ny Lalàna fehizoro 2018-008, ao amin’ny andininy faha-52 », hoy ny fanamarihan’ity firaisamonim-pirenena ity tamin’ny fanambarana nataony taorian’ny fivorian’ny mpikamban’ny birao nasionaliny nandinihina momba ny Lalampanorenana sy ny lalàna mifehy ny fifidianana. Nanao fampahatsiahivana ny KMF/CNOE –Fanabeazana Olompirenena” fa tokony natao tamin’ity volana jolay 2019 ity io fifidianana kaominaly io raha toa ka nihevitra ny tsy hisian’ny fahabangan-toerana eo anivon’ny Kaominina ny Fitondrana. Ny fametrahana Delegasiona Manokana, hoy ny fanambarany, dia « tsy manaraka ny fenitra demokratika » ary « tsy rariny raha toerana natokana ho an’ny olomboafidy no omena tantanana olomboatendry ».
Mihemotra amin’ny fotoana tsy voafetra ny fifidianana Ben’ny tanàna sy mpanolontsaina. Betsaka na izany aza ireo antoko, fikambanana eny olom-pirenena te hahalala ny andinindininy mikasika ireo fifidianana ho avy ireo. Betsaka no mitaraina raha ny eto Mahajanga fa matetika no mikatona ny biraon’ny CENI eto an-toerana amin’ny fotoana ahatongavan’ny olona te hahazo fanampim-panazavana manodidina ireo fifidianana ireo, ka mametra-panontaniana hoe amin’ny firy ny ora fivohan’ny biraon’ny CENI Mahajanga ?
jeudi, 25 juillet 2019 19:55
Marc Ravalomanana: Any Alemaina, mikaroka izay hahasoa ny tanindrazana
Any Alemaina ny filoham-pirenena teo aloha, sady filoha nasionalin’ny antoko Tiako i Madagasikara, Marc Ravalomanana. Midinika amina tomponandraikitra sy teknisianina samihafa any an-toerana izy, « mikaroka izay hahasoa ny tanindrazana ». Isany manampy azy amin’izany Atoa Harald Gehrig, masoivohon’i Alemaina vao nandao tsy ela an’i Madagasikara, rehefa avy niasa nandritra ny dimy taona teto. (Jereo Sary Tohiny)
jeudi, 25 juillet 2019 18:54
Lalàna mifehy ny mpanohitra: Averina hodinihin’ny Depiote sy Senatera
Hivory tsy ara-potoana ny Antenimieram-pirenena sy ny Antenimierandoholona manomboka amin’ny alatsinainy 12 aogositra 2019. Lahadinika iraisan’ny Antenimiera roa tonta ny fandinihana ny tolo-dalàna mikasika ny lalàna mifehy ny antoko mpanohitra sy ny fampahafantaran’ny governemanta ny politika ankapoben’ny fitondram-panjakana. Miampy ny fandinihana ny fitsipika anatiny mifehy azy ny lahadinika ho an’ny Antenimieram-pirenena. Noraisina androany nandritra ny filankevitry ny minisitra teny amin’ny lapam-panjakana Iavoloha ny didim-panjakana mampiantso io fivoriana tsy ara-potoanan’ny Antenimiera roa tonta io, izay haharitra 12 andro.
mercredi, 24 juillet 2019 21:03
Gouvernement: Seul un changement
Pr Blanche Nirina Richard fait son entrée au gouvernement Ntsay Christian. Elle remplace Pr Rejo Félicité au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Les 21 ministres du premier gouvernement Ntsay sont reconduits à leur poste respectif. Les membres du 2e Gouvernement Christian Ntsay sont :
mercredi, 24 juillet 2019 19:20
Governemanta vaovao: Nanao pi-maso amin’ny praiminisitra ny depiote
Nanao pi-maso, pi-maso miandry valim-pitia amin’ny praiminisitra ny depiote, tamin’ny alalan’ny filohany Christine Razanamahasoa androany, na tsy nivantana aza tamin’ny famaranana ny fotoam-pivoriana manokan’ny Antenimieram-pirenena nananganana birao maharitra sy ireo vaomiera samihafa. Tolo-kevitra avy amin’ny solombavambahoaka no nivoahan’ny anaran’ny praiminisitra natolotra ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ka nanendreny an’i Ntsay Christian ho praiminisitra lehiben’ny governemanta. Miandry valim-pitia ny depiote, amin’izao fananganana governemanta vaovao izao, mba hisy depiote amin’ireo minisitra izay hotendrena.